Daawo Sawirada: Donald Trump oo Sargaal caan ah u magacaabay la taliyihiisa Amaanka Qaranka!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirada: Donald Trump oo Sargaal caan ah u magacaabay la taliyihiisa Amaanka Qaranka!!
Daawo Sawirada: Donald Trump oo Sargaal caan ah u magacaabay la taliyihiisa Amaanka Qaranka!!
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay lataliyihiisa amaanka qaranka , waxa uuna xilkaasi u magacaabay sargaal caan ka ahaa Ciidanka Mareykanka oo lagu magacaabo jeneraal Herbert Raymond McMaster .
Lataliyaha cusub uu magacaabay Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa badalaya jeneraal Michael Flynn oo kaliya lataliye ahaa 24-cisho, waxaana sargaalkan xilka laga eryay kadib markii lagu eedeeyay in xariir aan munaasib aheyn la sameeyay Dowlada Ruushka.
Jeneraal Herbert Raymond McMaster oo noqday lataliyaha cusub ee Amniga Qaranka Madaxweyne Trump , waxa uuna sargaalkan horey uga soo shaqeeyay dalalka Afgaanistan iyo Ciraaq isagoo qaabilsanaa ka hortaga musuq maasuqa.
Madaxwreyne Trump ayaa magaacbista lataliyhiisa Amniga Qaranka uga dhawaaqay gobolka Florida, waxa uuna tilmaamay in jeneraal Herbert Raymond McMaster uu yahay nin xushmad badan ku dhax leh ciidamada shaqo fiicana horey usoo qabtay.
Lataliyaha cusub ee Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa Jariirada Time waxa ay sanadkii 2014 ku dartay liiska boqolka qof ee ugu saameynta badan caalamka, waxaana sargaalkan lagu sheegay nin caan ku ah soo bandhigida argtidiisa,
Previous PostHey´da IMF oo ka caawinaysa dowlada Soomaaliya daabacida lacag Shillin Soomaali cusub! Next PostDAAWO MUUQAAL> Gaber Soomaaliyeed oo baaq udirtay dhalinyarada Soomaalida, Gabertaan oo ku nool Swedan waxay qaati ka taagan tahay....!!